ကလေးငယ်တွေ ပြောလို့ဆိုလို့မရနိုင်လောက်အောင် ဆိုးသွမ်းနေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
Home Family ကလေးငယ်တွေ ပြောလို့ဆိုလို့ မရနိုင်လောက်အောင် ဆိုးသွမ်းနေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
ကလေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကို အတုယူတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင် Marta Segrelles ရဲ့ပြောစကားအရတော့ လူအများစုရဲ့စိတ်သဘောထားတွေဟာ သူတို့ရဲ့မိဘတွေဆီက အမွေဆက်ခံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးတွေဟာငယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့ရဲ့မိဘတွေဆီက အကျင့်စရိုက်တွေကို တဖြည်းဖြည်းစိမ့်ဝင်လာပြီးတော့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့ မိဘတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို စတင်ကျင့်သုံးစပြုလာပါတော့တယ်။ မိခင် ဒါမှမဟုတ် ဖခင်ရဲ့ စိတ်သဘောထားတွေဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်လွှမ်းမိုးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ သူရဲ့ဘဝတစ်သက်တာလုံးမှာ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းစတာတွေရဲ့ အစဖြစ်သလို သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ကျူးလွန်တဲ့အမှားများဟာ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တာမျိုးနဲ့ အတူတူဘဲမို့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို တည့်မတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင် Segrelles ကပြောကြားအချက်အရ မိဘများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ကလေးငယ်တွေအပေါ် ပွင့်လင်းစွာရှိဖို့နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အပြုအမူဆိုးတွေကိုလည်း လက်သင့်မခံဖို့ ဝန်ခံပြောကြားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုခုကို အပြစ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျရှုမြင်ဖို့ လိုအပ်သလို မိမိတို့ရဲ့ ပြုမူပြောဆိုပုံတွေကိုလည်း သတိထားဆင်ခြင်ရပါမယ်။ ကလေးငယ်တွေကို စိတ်ဒဏ်ရာရစေနိုင်မယ့်စကားလုံးတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် အမှန်၊အမှားကို သင်ပြပေးရပါမယ်။ ကလေးတွေအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်သဘောထားတွေ နူးညံ့သိမ်မွေ့လေလေ ကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကောင်းမွန်လာလေလေမို့ ကလေးငယ်တွေကို ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာလုံးဝမဆက်ဆံမိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အမှတ်တရကောင်းတွေတည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို သူတို့ရဲ့ဘဝသာယာလှပနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင်မပြေနိုင်တာတွေကို လက်သင့်ခံနိုင်အောင် သင်ပေးရပါမယ်
ဘဝဆိုတာကြီးက ထင်သလိုဖြစ်မလာတတ်တာတွေ ရှုံးနိမ့်မှုတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေ၊ လိုအင်ဆန္ဒမပြည့်ဝတာတွေဆိုတာမျိုးက အမြဲတမ်းဖြစ်နေကြမို့ အမြဲတမ်းလမ်းမှန်ရောက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါဘဲ။ အချို့အရာတွေက ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားဖြစ်မလာနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေလည်းရှိတတ်တာမို့ ထင်သလိုဖြစ်မလာနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျ စိတ်ဓါတ်တွေဘုန်းဘုန်းလဲကျမသွားရအောင်ကလေးငယ်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါမယ်။ အဲ့ဒီလိုသင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်က ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ
ပျောက်ပျက်မသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိတို့ ကလေးငယ်တွေဟာ ဘယ်လိုနေရာမှာအားသာချက်ရှိတာ အားနည်းတာဆိုတာကို သိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ အားသာချက်ကို တွန်းတင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်အပေါ် စိတ်အားငယ်မှုကို ချေဖျက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ရိုးသားပြီး စိတ်ထားကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာနဲ့ မိဘတို့ရဲ့မပြည့်ဝခဲ့တဲ့ အတ္တတွေကို ကလေးငယ်တွေအပေါ် အသုံးမချမိဖို့ဆိုတာကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous articleအမျိုးသမီးတွေမှာသာ တွေ့ရနိုင်တဲ့ အံ့ဩဖွယ်ရာအစွမ်းသတ္တိများ
Next articleပိန်ပိန်သေးသေး ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တတ်စေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့